Taliska ciidamada taraafikadda Soomaaliya oo amaro dul-dhigay dadka kala iibsanaya baabuurta – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Taliska ciidamada taraafikadda Soomaaliya oo amaro dul-dhigay dadka kala iibsanaya baabuurta
Taliska ciidamada Taraafikadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay amaro culus dul-dhigay dadka kala iibsanaya baabuurta, kadibne ku dhexwata magaalada Muqdisho, si loo adkeeyo amniga islamarkaana looga hortago qaraxyada baabuurta loo adeegsado.
Taliyaha ciidamada taraafikadda Soomaaliyeed Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay habka saxda ah ee laga doonayo dadka kala iibsanaayo baabuurta, wuxuuna tilmaamay inay muhiim tahay in qofka iibsanaayo gaariga inuu ku dadaalo in buuga gaariga lagu qoro magaciisa, si loo ogaado inuu gaariga isaga leeyahay.
Taliye Cali Gaab ayaa sheegay in qof kasta oo gaari ku wata magaalada Muqdisho laga rabo inuu wato buuga lahaanshiyaha gaarigaasi oo magaciisa ku qoran yahay, wuxuuna ku hanjabay qofkii aan la imaan lahaanshaha gaariga aan la siin doonin, loona qaadan doono inuusan gaariga lahayn.
“Gaarigii aan soo qabano ee aan kasoo qaadno goobaha gawaarida loo diiday in la dhigto ee wadada hareeraheed ah, waxaa qofka sheeganayo gaarigaasi laga doonayaa inuu la yimaado buug uu ku caddeynayo lahaanshihiisa, waxaana qasab ah inuu ku qornaado magaciisa” Sidaas waxaa yiri taliye Cabdi Gaab.
Amarkaan kasoo baxay taliska ciidamada taraafikadda Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli magaaladda Muqdisho ay ka socdaan barnaamijka xasillinta ammaanka caasimadda, islamarkaana ay si aad hoos uga dhaceen qaraxyadii iyo dilalkii qorsheysnaa ee hore uga dhici jiray magaalada.